eHarmony manangana tranokala fanaovana asa ho an'ny asa… Srsly | Martech Zone
Ny tranokalan'ny fikarohana asa dia ampolony am-polony. Betsaka tokoa amin'izy ireo no manandrana manavaka ny tenany aza ny sasany amin'izy ireo amin'ny filazany fa, "the eHarmony" ho an'ny asa. Araka ny Dr. Neil Clark Warren, ilay mpanorina ny eHarmony, "Tsy izy ireo." Ankehitriny ny orinasany dia manana vokatra ara-dalàna hanaporofoana an'io ary tena marani-tsaina sy be pitsiny noho ny eritreretinao azy.
Warren sy ny ekipan'ny vokatra natolony dia nanangana Elevated Careers avy amin'ny eHarmony tany Los Angeles tamin'ny herinandro lasa teo. (Fanambarana, mpanjifan'ny PR izy ireo fihenjanan'ny resaoro, ilay orinasa iasako miasa, amin'ny alàlan'ny Strategies Branded.) Ny sehatra dia maka ny fomba fampifanarahana ny algorithm amin'ny fanambadiana avy amin'ny sehatra voalohany ary mampihatra izany amin'ny olana mifanandrify amin'ny asa. Saingy nitandrina izy ireo nanazava fa tsy ilay algorithm mampiaraka / fanambadiana tafiditra ao anaty tranokala fikarohana asa.
"Nampiasainay ny filozofia iray ihany avy amin'ny zavatra niainanay tamin'ny fananganana ny motera eHarmony ary nametraka fanontaniana mitovitovy amin'izany momba ny fampifanarahana asa," hoy ny fanazavan'i Steve Carter, filoha lefitry ny Matching ao amin'ny eHarmony, fa ny ankamaroan'ny teknolojia ao ambadiky ny kariera avo lenta. Izy sy ny ekipany dia nanangana algorithm hafa izay maka angona avy amin'ny mpikatsaka asa ary angona avy amin'ireo mpampiasa mety avy eo dia mifanandrify amin'izy ireo miaraka amin'ireo lafin-javatra 16 lehibe, sahala amin'ireo antony fifandraisana 29 ampiasain'ny fikarohana ao amin'ny vokatra eHarmony. Ireo lafin-javatra 16 dia azo antoka fa fananana, saingy tafiditra ao anaty siny telo lehibe ifantohana izy: ny maha-olona, ​​ny kolontsaina ary ny fifandraisana.
Ka handrahoana azy io dia namorona serivisy fampifanarahana asa izy ireo fa tsy serivisy mitady asa, azon'ny orinasa atao ny mandoa vola satria, raha ny teoria, dia afaka manampy ny fikambanana iray hikarama mpiasa sahaza kokoa azy io, hanana fotoana bebe kokoa hahombiaza ary hijanonana lava miaraka amin'ny orinasa. Tsy afaka mampitombo ny vokatra fotsiny izany fa mampihena ny vidin'ny fandraisana olona vaovao. Ny famindram-pahefana, araka ny filazan'izy ireo eo amin'ny tontolon'ny HR, dia somary ratsy.
Ireo mpikaroka asa dia afaka mampiasa ny tranokala maimaimpoana ary manana fangatahana karazana karazan'olona andrasana amin'ny fizotrany fidirana. Manomboka eo, ny tranonkala dia manolotra ireo mpampiasa izay mety tsara amin'ny toetranao, ny filanao kolontsaina, ny traikefanao sy ny toa izany. Raha efa naka asa ianao vao hahatsapa fa tsy tena mifanaraka amin'ny kolotsaina ianao, dia afaka mahita ny tombotsoan'ny olona toa izao.
Ary araka ny antenainao avy amina manam-pahaizana momba ny fifandraisana, i Warren dia nanala karazana fifandraisana sy statistika mahaliana momba ny fomba tsy mahasambatra anao amin'ny asanao, izay manenika ny fiainanao manokana, ny fifandraisanao, ny fahasalamanao ary maro hafa. Ka raha ny tena izy dia miady hevitra ny Elevated Careers fa afaka manampy ny orinasa hanana mpiasa sambatra kokoa izay miaina fiainana sambatra sy yada yada.
Ny fanontaniako, izay apetrako aminao ary tiako ny valinteninao amin'ireo hevitra ireo:
Tena azo atao ve ny mangotraka ny psikolojia sy ny fifandraisana amin'ny olombelona amin'ny alàlan'ny algorithm alain'ny fanadihadiana? Amin'ny maha-mpihaino mahavariana ny haitao anao, ny eritreritro dia hiteny ianao hoe “eny” fa ahoana kosa ny momba ny hadisoan'olombelona rehefa miditra? Rehefa mitady asa aho dia mety kokoa ny milaza izay heveriko fa tadiavin'ilay orinasa fa tsy izay tena tsapako, eritreretiko na inoako momba ahy amin'ny maha kandidà ahy. Na dia tsy natsangana ho toy ny resume na tranokala fikarohana aza ny asa ambony, ny toe-tsaina mameno io taratasy io dia iray amin'ireo, "Inona no heveriko fa tadiavin'ireo mpampiasa ahy hoteneniko?"
Ny orinasa dia mampiasa teknolojia ho an'ny zava-drehetra manomboka amin'ny marketing ka hatrany amin'ny supply chain sy ny sisa. Saingy vonona ny hatoky algorithm iray hofidina, na hisafidy ireo mpilatsaka hofidina ho avy izy ireo? Azo antoka fa tsara kokoa noho ny manamarina ny pejy Facebook -na momba ny sary bong bong, ary ny mifanandrify amin'ny Careers dia tsy ho fanapahan-kevitra farany horaisin'olon-kafa, fa tena vonona hampiasa vola amin'ny haitao tokoa ve ny asan'ny HR?
Inona no mitranga amin'ireo mpandray mpiasa karamaina hametrahana kandidà raha toa ka mifanohitra amin'ireo mitady azy ny fifaninana / kolontsaina / fifandraisana?
Hatraiza ny halaviran'ny fomba fiasa toa izao? Azontsika atao ve ny mamorona algorithm mba hifanaraka amin'ireo masoivoho amin'ny mpanjifa? (Tiako ny mahita izany angona izany. Heh.) Azo antoka fa ny fomba fiasa mitovy amin'izany dia azo ampiharina amin'ny fifandraisan'ny mpivarotra sy ny mpiara-miasa. Saingy mila ambaratonga fanombanana amin'ny antoko fahatelo amin'ireo fikambanana voarohirohy izy io. Firy amin'ireo orinasa no hanokatra ny varavarany amin'ny fitsapana ny toetran'ny fikambanana?
Hitako manaitra ny asa ambony. Mahaliana ny mahita azy io any am-piasana. Ka ny fanontaniana mipetraka dia izao: Ahoana ny hevitrao? Hampiasa azy io ho mpitantana mpikarama ve ianao raha manana fidirana? Hampiasa azy io ho toy ny mpitady asa ve ianao? Anareo ny hevitra.
Tags: algorithmseHarmonyasa ambonyTeknolojia HRloharano mpiasafampifanarahana asateknolojia mifanandrify